Vina Fisandratana 2030 : Feno hipoka I Fort Dauphin -
AccueilRaharaham-pirenenaVina Fisandratana 2030 : Feno hipoka I Fort Dauphin
01/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nahaliana ny vahoakan’I Fort Dauphin ny fanazavana nomen’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny vina Fisandratana 2030. Tonga marobe izy ireo nihaino ny fanazavan’ny Filoha. Feno hipoka mihitsy ny kianja nandraisana ny Filoham-pirenena mivady tamin’izany. Porofo izany fa tia fandrosoana ny vahoakan’i Fort Dauphin. Mametraka fanantenana sy fitohizan’ny fampandrosoana efa notarihan’ny filoham-pirenena ankehitriny.
Nomarihan’ny filoha fa tsy maintsy tafavoaka i Madagasikara ary tsy maintsy resy ny fahantrana. “Tsy maintsy tafavoaka amin’ny fahantrana, ary tsy maintsy resintsika ny tsy fanjariantsakafo aty amin’ny faritra Anosy. Efa miroso amin’ny fampandrosoana isika ka mila mitsinjo lavitra , ary mila fiaraha-mientana izany”, hoy ny filoha tamin’ny kabariny.
Tafiditra indrindra amin’ny ady amin’ny fampihenana ny tsy fanjariantsakafo izao dian’ny filoha mivady any Faradofay Faritra Anosy izao. Ho an’i Madagasikara, dia mahatratra 47 isan-jato ny tahan’ny ankizy latsaka ny 5 taona tratran’ny tsy fanjariantsakafo mitarazoka, ka ireo any amin’ny faritra Atsimo no tena lasibatra amin’izany. Mba hanenana io taha io, efa misy ny paikady ataon’ny Fitondram-panjakana hampidinana izany ho 38 isan-jato hatramin’ny taona 2021, izay miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Ao anatin’ny fanenana izay taha izay indrindra, dia nidina ifotony nanatanteraka fitsidihana any an-toerana ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, omaly niaraka tamin’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, sy ireo mpiara-miombon’antoka toa ny Ofda, Oms, Dfid/Ukaid, ny masovoiho Alemana sy ny Japon ary nanolotra fanomezana ho an’ny ady amin’ny tsy fanjariantsakafo any an-toerana.
Nisy ny fanolorana fitaovana sy fanafody ho an’ny ivon-toerana ara-pahasalamana sy ireo mpiasan’ny fahasalamana any Taolagnaro, toin’ny fandriana ho an’ny Creni miisa 40, fanafody 30 baoritra, armoire métallique 120, moto 60 isa ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana, bisikileta 1000 ho an’ireo mpanentana ara-pahasalamana, karine ho an’ny fahasalamana miisa 15 000, lambam-pandriana 50, fiara tsy mataho-dalana miisa 6, finday 1 164 isa, solosaina 10 is, a ary power bank miisa 91, ampiasaina amin’ny ady atao amin’ny tsy fanjariantsakafo any an-toerana.